» कसरी जोगाउने संक्रमणबाट बालबालिकालाई ?
२९ भाद्र २०७८, मंगलवार ०६:४२
कोरोना संक्रमणको बेला घरभित्रै सीमित ८ वर्षीय सुशान्त सुवेदीको स्कुल फेरिएको छ। संक्रमणअघि काठमाडौंको निजी स्कुलमा पढ्थे। अहिले धादिङ, गंगाजमुनास्थित सरकारी स्कुलमा पढ्छन्।
एमबीबीएस उत्तीर्ण चिकित्सक, स्टाफ नर्स र स्वास्थ्य सहायकहरू अस्थायी रूपमा नियुक्त गर्नुपर्ने डा. राईको सुझाव छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन, दक्षिणपूर्वी एसिया क्षेत्रका सदस्य राष्ट्रहरूले प्रत्येक विद्यालयलाई स्वास्थ्य प्रवद्र्धन गर्ने विद्यालय बनाउने संकल्प गरेका छन्। नेपालले आयोजना गरेको कार्यकारी समितिको वार्षिक बैठकमा सदस्य राष्ट्रहरूले महामारीको दौरान पनि सुरक्षित तरिकाले विद्यालयहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकताका बारेमा पनि विचार विमर्श गरेका थिए। अन्नपूर्ण पोस्टमा दिनेश गौतमले खबर लेखेका छन् ।